Ngaba iiBlogger zinokuba yindawo yesine? | Martech Zone
Ngaba iiBlogger zinokuba yindawo yesine?
NgeCawa, ngoMatshi 8, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Isidima yindawo yokuqala, iicawe sesibini, abantu bangabesithathu… kwaye ubuntatheli bekuhlala kucingwa ukuba yindawo yesine. Njengoko amaphephandaba aqala ukuphulukana nomdla wokuba ngumlindi wabantu kwaye-endaweni yoko-egxile kwinzuzo, abapapashi baqala ukujonga ubuntatheli njengokugcwalisa phakathi kweentengiso kunokuba kube nenjongo ebomini.
Siyaqhubeka nokubona ukuphela kwamaphephandaba nangona italente yobuntatheli ingazange ishiye- yinzuzo kuphela eyenziweyo. Inkqubo ye- iphephandaba ukubukela ukufa iyaqhubeka. Ndibuhlungu ukubona uninzi lweentatheli ezinetalente zophando ziphulukana nemisebenzi. [Umfanekiso kwi-Economist]
Kwakukho intatheli kumsitho wakutshanje endithe ndathetha nawo wandibuza ukuba uza kubhloga ntoni emhlabeni ukuba uza kuqala. Ndimxelele ukuba ndijonge ukubhloga kunye nobuntatheli njengeendlela ezimbini zonxibelelwano ezahlukeneyo. Ngokoluvo lwam, ibhlogi yenye yabelana ngeetalente zayo okanye ngamava akwi-intanethi. Ukubhloga kudume kakhulu kuba kusika umvelisi, umhleli kwaye intatheli… kwaye ibeka abaphulaphuli ngqo phambi kwengcali.
Ke iblogi yeendaba ingayintoni malunga nayo?
Ndikucebisile ukuba abhlog malunga nobuntatheli. Iintatheli zinabantu abanetalente emangalisayo kunye nokuqina. Benza amabali abo ngokuhamba kwexesha, ngomsebenzi omkhulu kunye nokumba ukuze bafumane inyani. Nangona iiblogger zisenza iindaba amaxesha ngamaxesha ukuba zibe ngumlindi, andikholelwa ukuba zikhona neqaqobana elinokulingana netalente iintatheli ezinazo- kungekuphela kokubhala, kodwa ukuhambisa eludakeni ukuya enyanisweni.
Ukuba ezinye iintatheli zinokwabelana ngolwazi lwabo lobugcisa babo ngebhlog- kunye nokuqonda malunga nokuba ngawaphi amabali abasebenza kuwo-kwaye babonelele ngamathuba okuqeqesha kunye nokufaka iibhlog, kunokubakho ithemba lokuba i-Fourth Estate ihlale kuyo. Ndiyathemba ukuba uyayiqala ibhlog kwaye aqale ukufundisa yonke indawo yebhlogos ngendlela esinokuthi sibe ngabalindi abangcono.
Ihlabathi elothusayo ngaphandle kweNdawo yeSine. Kuyacaca ukuba amajelo eendaba aphambili ashiye isikhundla sawo kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo njengeempawu zedola, abanini zabelo kunye nefuthe lezopolitiko elikugqithileyo ukubaluleka kobuntatheli obukhulu. Ndilapho xa saqala ukubhengeza iphepha-ndaba ukuba mangaphi amakhuphoni kuwo kwaye hayi iintatheli ezinetalente owanikwa ukufikelela kuzo.
UGeoff Livingston ubhale ekuqaleni kwalo nyaka ukuba imithombo yeendaba yabemi yayiyiFifth Estate. Mhlawumbi kuyinyani, kodwa andiqinisekanga ukuba nangayiphi na indlela sikulungele ukuthatha indima okanye uxanduva.
Jonga isiCwangciso sakho soMxholo ngeKhonkco yokuKhangela kuGoogle
Ukujonga ukuKhangela kweTab kuGoogle Analytics
Mar 10, 2009 ngo 2:26 PM
Ndicinga ukuba umhlobo wakho uyakukonwabela ukubhloga kuba uya kuba nenkululeko yokubhala into ayifumeneyo kwaye azikholelwe ngokwakhe. Andithethi ukuba ukuhlela okulungileyo akuyonto ilungileyo enokubonelela ngelifa lesine; kubonakala nje ukuba emva kwexesha, ayisenzi. Kukho isixa esikhulu sokubhala okulungileyo kunye nolwazi oluvela kuluntu lokubloga kunye nenkunkuma eninzi; ukuba ngumfundi onobuchule nokuqondayo kubalulekile.